MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA BOXADOR IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Boxador iyo Sawirada
Feedhyahan / Labrador Eey Caanbaareyaal ah oo Ey ah
Abby the Boxador (Boxer / Lab mix) markuu jiray 2 sano— 'Abby waa kalabar Boxer nus qeyb. Waxay jeceshahay inay la orodo oo ay la ciyaarto eyda kale iyaduna iyada jecel biyaha . Abby waa ku weyn yahay wiilkayga 4 jirka ah wayna wada joogeen tan iyo markii ay ahayd eey. Abby wax dhibaato ah kuma qabo bisadaha ama ari, laakiin wuxuu jecel yahay inuu cayrsado adhiga oo cun digaag . Waxay jeceshahay qodista waxayna qoday god qoto dheer oo ay ku dhex baasan karto. Abby waa gacaliso weyn oo wuxuu u maleynayaa inay tahay a dhabta eyga . Ma rabto wax ka badan in la jeclaado oo ay jacaylkeeda oo dhan ku soo celiso. Waxay leedahay midabeyn sidan oo kale ah qof walbana wuu la yaaban yahay iyadu waa Feeryahan / Shaybaar. '
Sanduuq - a - Albaab
Boxador ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Feedhyahan iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Harley the Boxador markii ay jirtay 2 sano— Waxaan Harley ku qaadanay hoygeena xayawaanka deegaanka markii uu jiray 6 bilood. Xaqiiqdii waa eeyga ugu caqliga badan ee aan abid haysto. '
'Dysen waa eey weyn. Miisaankiisu waa qiyaastii 115 rodol (52 kg). Aabihiis waa Feeryahan hooyadiisna waa Sheybaar yar. Waxaan la kulannay markii ugu horreysay markii uu jiray 5 maalmood. Waa 4 sano jir sawirkan. '
Nimble buniga yar ee Brownador ee 4 bilood jira oo ku ciyaaraya kubbadda koleyga ee liinta— 'Wax xun laakiin fiican. Nible waxay sifiican uga shaqeysaa tababaradeeda. Iyadu waa xariif ah oo qurux badan. Aabeheed waa Boxer jaale ah hooyadeedna waa Shukulaato Shukulaato ah. '
Fududeeyaha yar yar ee Boxador puppy at 4 bilood jir
Nimble eeyaha bunduugga ah ee Boxador ee jira 1 1/2 sano jir— 'Cusboonaysiin yar oo ku saabsan Boxador Nimble. Hada 1 sano iyo 5 bilood culeyskiisu waa 27 kg. (59 rodol 1/2). Dhogorteeda waxay u egtahay a Feedhyahan dhogorta laakiin xoogaa ka sii dhumuc weyn oo ka dheer. Aad u saaxiibtinimo xagga carruurta iyo dadka. Waxay qof walba ka dhigeysaa mid dareen gaar ah leh sidaa darteed uma sheegno inay qof walba sidaas ula jeceshahay. Ey aad u firfircoon, ciyaar badan, eey adag oo faraxsan. Waxay leedahay arrimo qaarkood eeyaha aan sugnayn laakiin wanaagsan leh dadka kale oo dhan . Si cadaalad ah u adeecsan markay rabto inay noqoto. Weli waan ka shaqeynayaa taas.
Fududeeyaha eyga Boxador ee buniga ah 1 1/2 sano jir
Guinness the Boxador markii uu jiray 2 sano— 'Guinness ayaan qabay tan iyo markii uu jiray 5-toddobaad. Waan ogahay khubarada badankood inay ka xishoodeen markay qaateen eey ka fog hooyadiis oo da 'yar . Guinness waa wiil cajaa’ib leh, jecel-xiiso badan, kaasoo FULL tamar badan. Wuxuu ku fiican yahay eeyaha kale iyo sidoo kale dadka. Wuxuu aadaa xannaanada carruurta ee loo yaqaan 'doggie daycare' 3 maalmood usbuucii waxaana si joogto ah ii weydiiyaa waalidiinta kale ee xayawaanka ah talooyin ku saabsan sida loo helo eeyohooda inay u noqdaan kuwo u dhaqma sida Guinness, taas oo iga dhigeysa mid weyn. Waxaan haystaa dhowr buugaag ah Cesar Millan, oo aniga ii ah sida bible. Sida looga kiciyo eeyga kaamil ah eey iyo wixii ka dambeeya aasaas u aasaasay naftayda iyo Guinness oo aan awood u yeeshay inaan ku dhiso 2 sano ka dib. Tilmaamaha ka imanaya buugaagta Cesar awgeed, waxaan haystaa eey meel walba iila taga, laga bilaabo maqaayadaha, dukaanka cuntada, jardiinooyinka iyo xitaa carwashka. Haatan waxaa loo aqoonsan yahay eyga adeegga, taas oo ah guul weyn oo isaga u gaar ah.
Guinness the Boxador markii uu jiray 2 sano
Duke the Boxador (Boxer / Lab mix) markuu jiray 1 sano— 'Duke wuxuu leeyahay shakhsiyadda ugu macaan, wuu jecel yahay qof walba. Waa eey 60 rodol rodol ah oo cagahayga ku jooga meel kasta oo aan tago. Xaqiiqdii waad ogtahay inuu qayb ka yahay Feeryahanka sababta oo ah habka uu ugu adeegsado cagihiisa hore wax walba! Isaguba aad buu uqosol badanyahay, isaga oo ka dhigaya mid aad ugu madadaaliya daawashada. Qof kastaa wuxuu ka faalloodaa sida uu u qurxoon yahay Duke mar walbana waxay rabaan inay ogaadaan nooca eyga uu yahay. ”
'Paddy the Boxador markii uu jiray 14 bilood-hooyadiis waxay ahayd Feeryahan aabihiisna wuxuu ahaa Labrador. Waxaan haystay ilaa 9 bilood hadda oo si xun ayaa loola dhaqmay 4tii ama 5tii bilood ee ugu horreysay noloshiisa. Wuxuu ku dhaganaa jikada ama beerta dambe haddii uu wax badan qaban kari waayo, taas oo uu ahaa. Nasiib ayuu lahaa haduu habeenki 1 lugeeyo. Weligiis ma arag eey kale illaa aan ka helay oo aan ka soo dejiyey beerta (HEAVEN). Waxaa sidoo kale maalin walba lasiinaayay cunno qaan gaar ah, taasina waxay ku reebtay calool xanuun. Isagu waa xariif, wuxuu ku bartaa xeeladaha dhowr jeer oo isku day ah. Wuxuu dejiyay rarka tan iyo markii aan helay. Isaga ayaa jecel socodka, taas oo uu haysto ugu yaraan 3 maalintii. Waxaan ku noolahay badda agteeda wuuna jecelyahay markay mowjaddu bannaanka ka baxdo. Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro kubada cagta waana mid aad ugufiican midkeenna. Waxa kale oo uu jecel yahay kaynta iyo baarkinka dhamaadka wadada. Waxaan ku hayaa fiidiyowyo YOUTUBE isaga oo ah Paddy. Qoyska oo dhami way jecel yihiin inuu wax kala jaro oo isagu waa hanka qoyska. Wuxuu jecelyahay sausages, digaag cad oo dhan, bariis, baastooyin, digir, sidoo kale wuxuu jecelyahay kalluunka cusbada iyo kalluunka, turkey, hilibka lo'da, doofaarka, bakaylaha-hilib kasta. '
'Haye, magaceygu ​​waa Moose. Waa kan sawirkeyga markii hooyaday iyo aabbahay markii iigu horreysay i heleen anigoo 6 toddobaad jira iyo sawir aniga oo 6 bilood jira miisaankiisuna yahay 65 rodol. Waxaan jecelahay inaan ciyaaro dheelitirka iyo inaan gaariga ku raaco. Waxaan bartay inay tahay inaan guriga ku weelin laba usbuuc oo keliya, in kasta oo aan shilal dhawr ah galay, laakiin hadda waxaan xasuustaa inaan waalidkay u sheego inay tahay inaan banaanka u baxo markaan dareemo rabitaanka. Aad ayaan ujeclahay oo waxaan sifiican ula ciyaaraa eeyaha kale iyo dadka waaweyn. Hooyo iyo Aabbe waxay u maleynayaan inaan wanaag ku qaban doono carruurta, markaan ogaado cabirkeyga. Waxaan mararka qaar u malaynayaa inaan ahay eey dhab ah, oo u fiican Aabbaha, laakiin xoogaa culus baan ku noqon karaa Hooyada. Waxaan caado u leeyahay inaan jarjaro wargeysyada markii fursad la i siiyo, laakiin kaalay waxa eyda aan sameynin? Aabbahay wuxuu leeyahay waxaan leeyahay shakhsiyad weyn oo ku muujiya wejiyada qosolka leh ee aan sameeyo, hooyadayna had iyo jeer waxay iigu yeeraysaa dabeecad iyo ham. Waalidkey waxay dhahaan ma rumeysan karaan sida ay nasiib ugu heleen inay helaan caqli badan, fudud oo ey ku tababaraan.
'Kani waa Chopper, oo ah 20-bilood jir isweydaarsi Boxer / Labrador. Cagahayga ayuu ku jiraa sankiisuna wuxuu ku jiraa waxa aan sameynayo waqtiga oo dhan. Isagu waa nin cajiib ah! Isagu waa eeygii iigu waqtiga badnaa ee aan abid haysto. Wax walba isaga ayey u ciyaaraan waqti badan ayaan ku lumiyaa 'inaan waxyaabaha dhigo.' Wuxuu ku adkeysanayaa inuu seexdo halka aan joogo, xitaa kursiga fadhiga. Isagu waa caqli badan yahay, isboortis, daacad iyo saaxiib weyn. Wuxuu jecel yahay inuu fuulo, eryanayo digaagga. Xaqiiqdii wuxuu helay sida ugu fiican labada nooc. Sawirkaan wuxuu sugayey dhaq-dhaqaaqayga xiga ee kama tagayo indhahayga.
Bunka 5-jirka Boxador-milkiilaheeda ayaa leh, Wali waxay ka buuxdaa tamar badan. Waxaan jecel nahay isku dhafka noocyada, iyadu waa mid la jeclaan karo oo aad u saaxiibtinimo mararka qaar, qof walba wuxuu ka faalloodaa Bunka, wejigeeda eey yar iyo indho caddeyn leh! '
Kani waa kii Shaybaarka / Feedhyahan , Durango. Waa 3 jir iyo badh. Waa eey saaxiibtinimo badan, laakiin wuxuu jecel yahay Hooyo iyo aabbe gadaal ku dhuumasho Markuu ag joogo shisheeyaha ama uu maqlo dhawaqyo yaab leh.
'Aad buu u caqli badan yahay. Mar kasta oo uu helo toy cusub, wuxuu helayaa magac. Wuxuu kaliya ubaahanyahay inuu maqlo 2 ama 3 jeer, ka dib markaas waa la xafiday. Haddii aan u sheegno inuu mid helo, wuu sameeyaa. Wuxuu garanayaa ereyo aad u tiro badan, sida: fuulid, cunto, dheri, ayeeyo, baradhada baradhada, cun eat iyo qaar kaloo badan. Waa inaan bilowno higgaadinta ereyada, asagana sidoo kale wuu soo qaatay.
Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro dheelsi iyo Frisbee. Waxaan ku dhaaranayaa inuu yahay qayb ka mid ah Bakeylaha Energizer , waligiis ma istaago. Waxaa jira waqtiyo uu umuuqdo inuu aad ugu dhegan yahay oo uu leeyahay kala-goynta arrimaha walaaca . Isagu wax ma baabi'iyo, laakiin wuxuu ku socdaa hab aanad ka filan karin eey eey le'eg tahay. Wuu ilmeeyaa oo u ooyaa si quus ah. Maaddaama aan hadda ku nool nahay magaalo, waxaan isku dayeynaa inaan guriga kula ciyaarno inta aan kari karno, ama tuurno Frisbee guriga gadaashiisa had iyo jeer sida ugu macquulsan. Wuxuu jecel yahay marka aan booqanno guriga halkaas oo uu ku heli karo dhammaan orodka iyo la ciyaarista eey saaxiibkiis ah. '
Annabel the Boxador (Lab / Boxer mix) oo ah cunug yar oo 12-toddobaad jir ah
Annabel the Boxador (Lab / Boxer mix) 5 bilood jir
'Kani waa Bailey, Boxador ama Boxer / Lab mix, oo ah 1 sano jir. Waxaan dhawaan ka soo qaadnay Bailey hoyga maxalliga ah waxaanan ogaanay inaan nahay gurigeedii 4-aad sannad gudihiis. Iyadu waa mid aad u ciyaareysa oo ay ka buuxdo tamar. Aad ayey u caqli badan tahay waxayna ku deg degtaa barashada tabaha cusub ee aan wax ku barano ama ay iyadu isku barato. Waxaan u geynaa degmo park eey maalin kasta (mararka qaarkood laba jeer maalintii) halkaas oo ay ku ordi karto 'bilaash' oo ay kula dhaqanto eyda kale. Maalmaha aynaan awoodin inaan u geyno beerta eyga jimicsi ayay u janjeertaa hel burbur. Waxaan u maleyneynaa in milkiilayaashii hore aysan siinin qadarka jimicsiga ee ay u baahneyd. Sababtoo ah waxay jeceshahay inay ordo oo booddo waxaan ka fikireynaa inaan ku tababbarno inay noqoto eyga duulimaadka, marka akhlaaqda aasaasiga ah la barto. Iyadu waa mid aad u ciyaareysa mana muujineyso wax gardarro ah eeyaha kale ama dadka kale, si kastaba ha noqotee waxay leedahay xiisaha xayawaanka iyo bisadaha waana ceyrsan doonaa haddii fursad la siiyo. Waxay leedahay arrimo qaab ah oo aan u malayno inay ugu wacan tahay inay ku jiraan guryo aad u tiro badan waqti gaaban iyo joogtayn la'aanta tababarka. Waxaan hadda la shaqeyneynaa aasaasiga iyada sida kaalay, joog, joog iwm . Meelkasto oo aan geeyno, dadku had iyo jeer way istaagaan oo na weydiiyaan nooca ey eey tahay oo ay dhahaan sida ay u qurux badan tahay. Bailey waa eey cayaareed cajaa'ib leh oo aniga iyo seyga aan isguursano aan ku faraxsanahay inaan is muujino oo aan ugu yeerno 'canuggeenna'.
Toby the Boxador (Iskutallaabta Lab / Feeryahan) 10 bilood jira
Diyaarso iskutallaabta Lab / Feeryahan (Boxador) da'da 5 sano. Mulkiilihiisu wuxuu leeyahay, `` Waa eey weyn oo dhan ''
'Kani waa Lab shukulaatadayada shaybaarka / ½ Feeryahan loo yaqaan Guinness. Wuxuu qiyaastii yahay 2 ½ bilood jir sawirradan. '
Guinness ½ shukulaatada Lab / ½ Boxer mix puppy at 2 bilood jir
isku darka tuugada eyda Australia
'Tani waa Eygayga eyda. Iyadu waa 30-lb., Saddex-iyo-bil-bil jir ah Eyga Boxador (Boxer / Lab mix). Iyadu waxay ahayd eeyga kaliya ee ku dhex jira qashinka leh sanka bunni shukulaatada iyo indhaha cows, markaa waa inaan iska soo qaado. Sidee qofna u jeclaan karin wajigaas qurxoon?! Iyadu waa xidhmo tamar ah, had iyo jeerna wax haysa. Waxay jeceshahay inay ku dabaalato balliga deegaanka, socod dheer kaynta, ku ciyaar kubbadaha ay ku ciyaaraan oo ku orod barxadda iyada oo yar mini Dachshund . '
Iyadu waxay ku dul socotaa xadhigeeda sida pro hadda iyo horay u bartay iyada amarrada aasaasiga ah sida fadhiista, joogida, soo degida, ruxida, hadalka, aamusnaanta, iwm. Waxay isu badaleysaa inay noqoto mid ka mid ah eeyaha ugu fiican ee aan waligeen soo marnay, waxaana rajeynayaa shirkadeeda sanadaha soo socda.
'Faith, 30-lb., Seddex-iyo-bil-bil jir ah Eyga Boxador ( Feedhyahan / Shaybaarka isku dar)
Eeg tusaalooyin badan oo Boxador ah
Sawirada Boxador 1
Boxador Sawirada 2
Liistada eeyaha isku dhafan ee feer
badh pitbull nus digaag terrier
barta casaanka ee isha eyga
qas shaybaarka isku darka buuxa koray
muxuu eeygu sidaa u sameeyaa
sawirka bulldog yar yar oo Mareykan ah